Iwe une simba rakaringana neAustralia Mombe Imbwa? - Inobereka
Iyo inozivikanwa zvakare seBlue Heeler, Australia Heeler, Red Heeler, Halls Heeler, kana Queensland Heeler, iyo Imbwa yeAustralia imbwa yakasarudzika inozivikanwa nehembe yaro.
Nehunhu hwakasimba hwekushanda uye hunhu husina musoro, imbwa dzakanaka idzi hadzisi shamwari yakakwana kune wese munhu.
Ramba uchiverenga kuti uwane zvimwe nezve rudzi urwu rwembwa apo patinowana nhoroondo yavo, tichifumura hunhu hwavo, uye tigoona zvinoita kuti vafare.
Imbwa yeAustralia yakabva kupi?
Ko Blue kana Red Heeler inoita sei?
Imbwa yeAustralia Imbwa yakanaka yemhuri chipfuyo here?
Kuchengeta Imbwa yeAustralia
Imbwa yeAustralia inogara kwenguva yakareba sei?
Iyo Blue Heeler inodhura zvakadii?
Blue Heelers inosanganiswa
Zvakanakira nekuipa kwekutora yeAustralia Mombe Imbwa
Mhando dzakafanana neBlue Heelers
Seizvo zita ravo rinoratidza, imbwa dzeAustralia dzakagadzirwa muAustralia mukupera kwezana ramakore rechi19.
Ivo vakasikwa nevagari uye vafudzi vaishandisa rudzi rwembwa kufudza mombe dzavo , uye zvimwe zvipfuyo zvechizvarwa, zvichishandisa kuruma uye nips.
Uku kudonhedza pazvitsitsinho kunopa imbwa idzi rimwe zita, iro Blue Heeler kana Red Heeler.
Idzi imbwa dzakasimba dzakabatsira mukukudza indasitiri yemombe munyika.
Imbwa dzinofudza dzakatanga kuunzwa kubva kuUnited Kingdom, inozivikanwa serudzi rweSmithfield, hadzina kuwanikwa dzichirwisa mamiriro akaomarara eAustralia, mamiriro ekunze akashata, uye marefu marefu.
Hunhu hwavo hwakadzikira hwakanga husina kukwana kufudza mombe dzemusango dzekuAustralia.
Nekudaro, idzi imbwa dzemakwai dzekumba, Border Collies , uye Dalmatians vaive yakaberekwa nema dingoes emusango eAustralia kukura imbwa inoshanda zvakaoma.
Misiyano mizhinji yemuchinjikwa yakadzvanywa pakutanga, neScotland bhuruu merle ine mavara Highland Collies ichiratidza kuve inodiwa kana ichinge yayambuka nemadhongi emusango.
Dalmations akawedzera kuvimbika uye rudo rwemabhiza, achigadzira imbwa dzine mavara. Dzimwe, idzo dzaive dzehama dzaVaBagust, dzakayambukirwa neKelpies nhema uye nhema kuti dziwedzere simba.
Iko kusanganisa kweAustralia Kelpies kwakakonzera bhuruu, uye mhando tsvuku dzeAustralia Mombe Imbwa yakagadzirwa, neBlue Heelers ichinyanya kufarirwa.
Ivo vakaratidzirwa kekutanga muna 1897 naRobert Kaleski, uyo akagadzirawo mwero werudzi rweAustralia Heelers, vachishandisa dingo sehwaro hwekushandira.
Aya matanho akatenderwa muna 1903 neKennel Club yeNew South Wales, iine zita rekuti Australian Heeler rakazozozivikanwa seMbudzi yeAustralia.
IAmerican Kennel Club (AKC) yakacherekedza rudzi urwu muna 1980, pakutanga vari pasi pekirasi yakasiyanasiyana, ichikodzera kuratidzwa muboka rinoshanda munaGunyana wegore iro.
MunaNdira wa1983, iyo Imbwa yeAustralia yakaendeswa kuboka rekufudza.
Tarisa uone Imbwa yeAustralia mukufudza chiito muvhidhiyo iyi:
Nhasi, Bhuruu neRed Heelers vanotaridzika zvakanyanya kufanana nesango dingoes, nejasi jira riri iro rinooneka musiyano.
Vari imbwa, dzakasimba, uye dzakatsiga imbwa , ine yakafanana kuvaka kune iyo dingo, asi zvishoma mukobvu uye yakawedzera mhasuru.
Muviri wakati rebei kupfuura kureba, nepo chipfuva chakadzika uye mapendekete akafara.
Makumbo akatwasuka pamakumbo akatenderera nezvigunwe zvipfupi. Muswe wavo murefu wakaiswa pasi, wakarembera nekakakombama.
Dzimwe imbwa dzinoshanda dzinozoisawo miswe yavo muUnited States, kunyangwe tsika iyi yakarambidzwa mune mamwe matunhu epasi.
Vane musoro wakapamhama, wakakombama zvishoma uine shaya dzakasimba, dzine simba, mutsipa wakakora-setwa, gwinha rinotyisa rine chigero-kuruma, uye nzeve dziri pakati nepakati, dzakafara dzakagadzika.
Mhino nhema uye dema rakasvibira maziso evha anopedzisa iwo maitiro.
Mombe dzeAustralia dzakakura sei?
Mombe dzeAustralia Dzakamira dzakatenderedza 17 kusvika 20 inches (43 kusvika 51 cm) akareba pakuoma uye kurema pakati Makirogiramu makumi mana nemakumi mashanu (14 ne23 kg) .
Varume vanowanzo pakati 18 kusvika 20 inches (46 kusvika 51 cm) , nevakadzi vari kungopfupika zvishoma pa 17 kusvika 19 inches (43 kusvika 48 cm) pakukwirira.
Mombe dzeAustralia dzinoonekwa seyakakura zvakakwana pamwedzi gumi nesere kusvika pamakore maviri.
Kunyange iri imbwa iri pakati nepakati, iri rakasimba rinoshanda rudzi isina kukodzera zvakakwana kugara mufurati uye inoda purazi, purazi, kana kunyangwe imba ine yadhi yakachengeteka kwavanogona kufamba, kumhanya uye kuongorora.
Kunyangwe vachida kuve vekunze, imbwa idzi inoda kugara mukati , kunyanya husiku, uye hazviite zvakanaka kana vakaparadzaniswa nemhuri yavo kwenguva yakareba.
Zvidiki zveAustralia Mombe Dzembwa hadzi zivikanwe zviri pamutemo.
Shanduro diki yerudzi urwu dzimwe nguva inogadzirwa nekusanganisa imbwa idzi nemhando diki, dzakadai seShih Tzu kana Dachshund, kana kugara uchizarira runt.
Nekudaro, imbwa idzi dzinogona kuuya nemakumi ezviuru zvezvinetso zvehutano uye zvinonyanya kudzivirirwa.
Iyo jasi reAustralia Mombe Imbwa
Queensland Heelers vane jasi rakapetwa , inoumbwa nekapfupi, rakakora jasi rejira uye rakatsetseka, jasi rekunze risingapinde mvura . Rutivi rwekunze rwunodzivirira rwakatwasuka, riine bvudzi repakati nepakati.
Mombe dzeAustralia Dzinouya maviri mavara akasiyana , kureva iyo Blue Heeler uye Red Heeler.
Sezvinoratidzwa nemazita, kupenda imbwa iyi kungave kwakakwenenzverwa bhuruu kana dema mune iyo Blue Heeler kana tsvuku tsvuku ine tan yeiyo Red Heeler dzakasiyana.
Dzimwe nguva, undercoat yembwa yeBlue Heeler inogona kuve tan nejasi rebhuruu rine mamaki emisoro mumusoro, chipfuva, shaya, huro, uye makumbo. Bhuruu Heelers dzimwe nguva anonzi ane merle color.
Kune rimwe divi, iyo Red Heeler yakatsvuka pese pese, iine red undercoat uye dzimwe nguva yakadzika tsvuku mamaki kunyanya pamusoro. Idzi imbwa dzimwe nguva dzinonzi brindle kana brown imbwa dzeAustralia imbwa.
Nembwa dzese dziri mbiri, zvidiki zvidiki uye bhuruu kana tsvuku kutiki inogoverwa zvakaenzana zvakaenzana pamusoro pejasi rine chena zvakanyanya. Rima dema mamaki haadiwe kuratidza imbwa.
Zvinogona kuve zvakaoma kuudza ruvara rweAustralia Mombe Dzembwa sembwanana nekuti imbwa idzi akazvarwa akachena chena, zvisinei kuti ndeiri yebhuruu kana tsvuku dzakasiyana.
Iyi hunhu hwakagarwa nhaka kubva kuDalmation pesvedzero. Ruvara dzimwe nguva runogona kutariswa nekutarisa mapads epavo.
Ruvara chairwo rwembwa rwunongotanga kukura kana Imbwa yako yekuAustralia yasvika panosvika vhiki ina.
Kunyange wakazvipira zvakanyanya uye wakavimbika kumhuri dzavo, Imbwa dzeAustralia hadziite sarudzo yakanakisa yembwa kumhuri dzine vana vadiki.
Rudzi urwu runowanzo batanidza munhu mumwe uye inogona kungwarira zvakanyanya vekunze.
Ivo dzimwe nguva vanozivikanwa sevharosi imbwa nekuda kwehunhu hwavo kunamatira kune mumwe munhu nguva dzese uye vanovenga kupatsanurwa kubva kune iye chaiye munhu kune chero nguva yakareba yenguva.
Nekuda kweizvozvo, ivo havaite zvakanaka kana vakasiiwa vega kwenguva yakareba uye vanogona kutendeukira kune hunoparadza hunhu, sekuchera uye kutsenga.
Ivo vanodawo mvura uye vane tsika yekushambira, kazhinji vachidonhera mudziva kana uchirida kana kwete.
Vanogonawo kuva kufungira vana ndiani anogona kuonekwa sekutyisidzira nekuti vanoita nekukasira uye vanoratidza maitiro asingatarisirwe.
Nekuda kweizvozvo, rudzi urwu rwekufudza hunhu uye hunhu hwehunhu kazhinji zvinonangidzirwa kuvana uye zvipfuyo zvemhuri zvidiki.
Senge imbwa ine mukanwa, ivo vanocheka uye kunyange kuruma pavanotamba uye vanogona kuve vakaomesesa nevana nedzimwe mhuka.
Yavo simba rekutyaira zvakare zvinoreva kuti vanozonyanya kufadzwa nekatsi, squirrel, uye tsuro.
Izvo zvakati, Mombe dzeAustralia Dzinogona kufambidzana zvakanaka nedzimwe imbwa kana dzikaziviswa kwavari sembwanana.
Nekudaro, ivo vanowanzoitira godo remunhu wavakasarudza kana imwe imbwa ichidururwa nehanya.
Aya mashandiro, maitiro ekufudza, uye kuzvipira kwevaridzi zvakaita kuti rudzi urwu rwembwa rufarirwe nevarimi. Ivo vanoshandawo vakanyarara uye havawanzo kuhukura, zvakanyanya sembwa dzemusango.
Nekudaro, masimba avo akakwirira anoda kuchengetedzwa kudzivirira kufinhwa kubva mukukambaira mukati. Zvakare, nenjere, hunhu hwemaune inoda kudzidziswa kusingagumi kudzora.
Imbwa dzemuAustralia dzine hukasha here?
Urwu rudzi muridzi akasimba muridzi kuvimbika kunovaita nharaunda dzinodzivirira ; zvisinei, sezvataurwa, usatarisira kuti rudzi urwu ruhukure.
Ivo inogona kuva nehasha nedzimwe imbwa, uye vausingazive uye kudzidziswa kwakasimba kunodikanwa kubva pahudiki kudzora uye nemazvo kuendesa maitiro aya.
Kana Imbwa yeAustralia ikabvumidzwa kuve mutungamiri wepaketi, saka hunhu hwavo, hunhu hunogona kutora nzvimbo, zvichivaita kuti varwe nedzimwe imbwa.
Nekutenda, rudzi urwu rwuri nyore kwazvo kudzidzisa; zvisinei, yakasimba uye yakasimba muridzi maitiro anodiwa.
Idzi imbwa kudzidziswa kwakanaka kuri kukonzerwa nenhoroondo yavo refu yekushandiswa sembwa dzinoshanda pamaranzi.
Sezvo imbwa dzemuAustralia dzakachererwa zvakanangana nekumisidzana nenzvimbo ine hukasha yeAustralia uye tembiricha yakakwira, ndizvo zvazviri imbwa dzinoshivirira zvisingaite uye dzakasimba .
Vari inokodzera chero mamiriro ekunze , kunyange kutonhora kwakanyanya, nekuda kwejasi ravo rekudzivirira.
Nekuda kweizvozvo, Imbwa yeAustralia haisi rudzi rune zvinodiwa zvakanyanya zvekuchengetedza. Hunhu hwavo hwakanyanya hunoita kuti varambe vachishanda kunyangwe vari mukurwadziwa kana kukuvara kana kutonhora zvakanyanya.
Saka iwe unofanirwa kuve wakangwarira kana uine hanya nekutarisira rudzi urwu.
Zviratidzo izvo imbwa yako iri kunetseka zvinogona kusanganisira kubvunda, kubvunda, kurova-rova, kuridza mhere, uye kubata mumuswe wavo pasi pemuviri nekusimudza makumbo avo pasi.
Ndinoita sei kuti ndichengete imbwa yangu yeAustralia Imbwa yakabatikana?
Iyi simba rakakura rekufudza anobudirira paanopihwa basa uye inoda kutamba kwakawanda uye kurovedza muviri kuti ugare uchifadzwa.
Kunze kwezviitiko zviri pachena zvekufudza, imbwa idzi dzinodawo kumhanya uye kuita zviitiko kwavanoshanda pamwe chete nemuridzi wavanoda zvakanyanya, senge kugona, imbwa mitambo, kuteerera, rally, frisbee, uye flyball.
Vanogadzira shamwari huru kune vanomhanya zvakakwana uye vanofamba uye inoda kufamba kwenguva refu kana majeki mazuva ese. Vane hunyanzvi hwekufamba nzendo refu vasinganeti.
Paunenge wabuda munzira, ita shuwa kuti haumboregi Heeler wako achifamba pamberi pako. Nekumanikidza imbwa yako kufamba padhuze kana kumashure kwako, iwe unosimbisa kuti iwe uri alfa iri mupakeji.
Kana ikapihwa yakakwana kurovedza muviri zuva nezuva kana angangoita awa imwe chete kana maviri zuva nezuva, rudzi urwu runogutsikana nekurara pamubhedha kana mukateti uye haizoratidze kusagadzikana maitiro.
Kunyangwe nzeve dzavo dzakabvarurwa dzichagara dzakangwarira chero chinhu chisina kujairika chiri kuitika.
Chikafu chakawanda sei chandinofanira kufudza yangu Imbwa yeAustralia?
Nekuda kwesimba ravo rakakura uye hunhu hunoshanda, veAustralia Heelers vanoda chikafu chembwa chakazara nemanyowa uye mavitamini ekuwedzera mhasuru nepfungwa.
Tarisa chikafu chembwa uko chinonyanya kukosha ipuroteni , dzakadai senyama yemombe, huku nehove. Zviyo nemiriwo zvinofanirwa kunge zvakanyorwa sezvinhu zvinotevera muchikafu chaunosarudza.
Dry kibble ichabatsira kuchenesa chikafu chavo uye matadza, asi iwe unogona kuona kuti imbwa yako painokura, mabhuru avo anoda kunyoroveswa kana kuda kuchinjira kuchikafu chakakanyiwa, chiri nyore pane chekugaya.
TO yakakurudzirwa huwandu hwe1.5 kusvika 2.5 makapu Zvekudya zvembwa zvinofanirwa kupihwa imbwa yako zuva rega rega, kupatsanurwa pakati pezvikafu zviviri.
Rudzi urwu runogona zvakare kubatsirwa kubva mukuwedzera zvakadai se glucosamine , iyo inosimudzira majoini ane hutano.
Ko Blue Heelers inodurura?
Kunyangwe iyo Imbwa yeAustralia Imbwa hakusi kunyanya kudurura , vanowanzo furidza jasi ravo kamwe kana kaviri pagore nekuchinja kwemwaka. Munguva ino, ivo vachadurura bvudzi ravo mu clumps.
Kunyange jasi kazhinji risingade kuchengetedzwa kwakawanda, kukwesha nekwakasimba bristle bhurashi kamwe chete pasvondo ichaita kuti imbwa yako igare yakachena uye isina tsvina.
Ungangoda kukwesha kakawanda mukati menguva dzekuteurwa zvakanyanya kuti ubvise iro rakawandisa bvudzi rakafa. Rudzi rwunowanzo kuve rwakachena uye rwakatsetseka, iyo Imbwa yeAustralia Imbwa hainawo kudonhedza mvura.
Kugeza kunongodiwa chete pazvinenge zvakakodzera, asi mazino anofanirwa kukweshwa kanokwana kaviri pasvondo kudzivirira kuwanda kwetartar.
Zvakare, edza nekuchekeresa nzara dzembwa yako pamwedzi kana dzikasadzipfeka zvakasununguka, uye tarisa nzeve vhiki nevhiki kuti chero hwema kana kutsvuka, izvo zvinogona kuve chiratidzo chehutachiona.
Ivhareji yehupenyu hweAustralia Mombe Imbwa iri pakati pemakore gumi nemaviri negumi nematanhatu . A Blue Heeler parizvino inobata zita re imbwa yekare muGuinness Book reWorld Records . Bluey akararama kusvika pazera rinonakidza remakore makumi maviri nemapfumbamwe.
Kana uchinge wawana weAustralia Heeler puppy, iwe unofanirwa kutarisira kuona clearances yehudyu uye elbow dysplasia, von Willebrand's chirwere, uye hypothyroidism kubva kuOrthopedic Foundation yeMhuka (OFA).
Chibvumirano chehutano chinosimbisa imbwa maziso eyakajairika inogona kutarisirwa, sezvingaite bvunzo ye thrombopathia kubva kuAuburn University. Izvi zvitupa zvinogona kuongororwa usati watenga mbwanana pane iyo OFA webhusaiti .
Semasimba, imbwa dzemitambo, veAustralia Heelers vanozviisa pasi pevakawanda zvirwere zvinokanganisa majoini nemarunda .
Pamwe chete nehudyu dysplasia, iyo inogona kukonzeresa mukurwadziwa uye kukamhina, rimwe dambudziko rakajairika rehutano rinogona kukanganisa Imbwa yako yeAustralia ndiyo Progressive Retinal Atrophy (PRA). Ichi chirwere chemaziso chinokonzeresa kuti retina idzikire.
Matsi dzinowanikwawo murudzi urwu; zvisinei, izvi zvinogona kuyedzwa kana imbwa yako iri imbwanana, uye imbwa dzemubereki imbwa hadzifanirwe kumboberekwa.
Yemhando yeAustralia Yemombe Imbwa imbwa inogona inodhura chero chinhu kubva pa $ 250 kusvika $ 1,100 , zvinoenderana nedzinza remubereki, muberekesi, nzvimbo, nezvimwe.
Hukuru hwemarara kazhinji hunowanikwa pakati pembudzi imwe chete kana mbiri, iine avhareji yevana vashanu.
Pamusoro pemutengo wekutenga Blue kana Red Heeler, iwe unofanirwa zvakare bhajeti mune yegore mari yekurapa, senge mishonga, kushanya kwezvipfuyo, uye deworming, iyo inogona kuita inosvika madhora mazana matanhatu kusvika kumadhora mazana masere pagore.
Vafudzi veAustralia Mombe Imbwa
Nepo imbwa idzi dzinowanzo kuberekwa sembwa dzezvipfuyo, unogona kutora dzichienda nemutengo unonzwisisika kubva kune vasina kunyoreswa vafudzi.
Zvisinei, gara uchiita basa rako rechikoro kuti utarise mamiriro ekuberekesa, hutano hwevabereki, uye nhoroondo yezvokurapa usati watenga imbwa yeAustralia Imbwa.
YeAustralia Mombe Imbwa Kirabhu yeAmerica ine kodhi yetsika yevafudzi uye runyorwa rwevanozivikanwa vafudzi pa yavo webhusaiti .
Heano mamwe eAustralia Mombe Imbwa vafudzi kuti vatange iwe pakutsvaga kwako kwakakwana pup:
Sugar N Spice Mombe dzeAustralia Dzembwa , Goodyear, Arizona
Iron Yakapfeka ACDs , Waddell, Arizona
Adams Ranch ACDs , Phelan, California
Mombe dzeAustralia Dzinonunura Imbwa / yekutora
Mombe dzeAustralia Dzembwa dzimwe nguva dzinotengwa nevaridzi vasingazive hunhu hwakasimba uye vachinetseka nekuva nadzo. Nekudaro iwe dzimwe nguva unogona kuwana imwe inowanika pakununura kana pekugara.
Kune akatiwandei eAustralia Mombe imbwa dzekununura mapoka kwaunogona kutsvaga imbwa iri kutsvaga imba ine rudo.
YeAustralia Mombe Imbwa Kununura Inc. iri rimwe sangano rakadai rinopa zvinongedzo kumasangano ekununura uye nembiru dziripo pane yavo Facebook peji .
Iwe unogona zvakare kuyedza kutsvaga Blue Heeler kumusoro kuti igamuchire pane aya masaiti:
Texas Mombe Imbwa Kununura , Texas
Ohio Mombe Imbwa Kununura Chikwata , Ohio
Carolina ACD Kununura uye Kudzoka , Carolina
Mamwe maAustralia Mombe Imbwa zvinosanganiswa zvine mutsindo nhasi.
Kuyambuka Blue Heeler kana Red Heeler nerumwe rudzi kunogona kukonzeresa imbwa ine yakasarudzika, yakanaka coloring yerudzi urwu asi nerumwe rudzi rwembwa hunhu, ichivaita shamwari dziri nani.
Mimwe yemasanganiswa anozivikanwa eBlue Heeler anosanganisira iyo Corgi Heeler, Beagle Heeler, Bhokisi Heeler, uye Blue Cocker Spaniel. Ngatinyatso tarisai mamwe akasanganiswa eAustralia Mombe imbwa inosanganiswa:
Pit Bull Bhuruu Heeler musanganiswa
Sangana naKroki, Mugomba Heeler (Pit Bull Bhuruu Heeler musanganiswa) - Mufananidzo sosi
Iyo Pit Heeler hafu yeBlue Heeler uye hafu yeAmerican Pit Bull Terrier.
Iyi yemhasuru uye yakasimba kubereka inokura kusvika kutenderedza 24 masendimita (61 cm) pakukwirira uye iine chitarisiko chinotyisa chinoita kuti vave vanonakidza varindi.
Sechisimba chine simba, iyo Pit Heeler inoda yakawanda yekurovedza muviri uye kudzidziswa. Idzowo imbwa dzakazvipira zvakanyanya dzinoshuvira kutariswa kubva kune avo vanhu.
Siberian Husky Bhuruu Heeler musanganiswa
Sangana neBere, Ausky (Siberian Husky Blue Heeler musanganiswa) - Mufananidzo sosi
Yambuka Imbwa yeAustralia ine Husky yeSiberia, uye iwe uchawana rudzi runoshingairira ine yakasimba yekutyaira mhuka.
Iyo inozivikanwa zvakare seAusky, imbwa iyi inowanzo kudzingirira vana uye mhuka diki uye inoda yakawanda yekudzidziswa uye kushamwaridzana kuti vachengete vari pasi pekutonga.
ChiGerman Mufudzi Bhuruu Heeler musanganiswa
Sangana naLiesel, wechiGerman Mufudzi Bhuruu Heeler musanganiswa - Mufananidzo sosi
Rudzi rune simba, rweGerman Mufudzi weAustralia Mombe Imbwa musanganiswa, inogona kukura kutenderera 25 masendimita (64 cm) kureba uye kurema pakati 30 uye 95 mapaundi (14 uye 43 kg) .
Sechirudzi chakakurisa chine hunhu hunodzivirira, ivo vanogadzirira imbwa dzinochengetedza dzakanakisa asi dzisina kukodzera kune varidzi vezvipfuyo.
Rudzi urwu rwunowanzo svikira pakudurura zvakawandisa pamwe neakanyanya kushambidzika zvinodiwa, nekuda kwejasi ravo gobvu rakapetana.
Ipo ivo vachigona kutaridzika vakanaka, Australian Cattle Dogs are isina kukodzera zvakakwana kune varidzi vekutanga-nguva varidzi vezvipfuyo uye chero munhu anogara mufurati.
Rudzi urwu runoda kukurudzira kwakawanda kwepanyama uye kwepfungwa uye runogona kuratidza hunhu hunoparadza kana hunoparadza pasina kudzidziswa kwakaringana uye kutarisirwa.
Izvo zvakati, varidzi vemapurazi kana vanhu vanoshingairira vachada ichi chakasarudzika rudzi rwekuvimbika, hunhu hwekudzivirira, uye simba rine simba.
Mhando dzinoverengeka dzakafanana dzinogona kuwanikwa dzinofanana neAustralia Mombe Dzembwa pakuonekwa uye dziine humwe hunhu hwakafanana.
Tarisa uone marudzi aya kuti uwane kumwe kufanana nekusiyana pakati pembwa idzi neBlue Heeler:
ChiDutch Mufudzi: Yekupedzisira Yekuberekesa Gwara Kune Iyi Brindle Mufudzi
Tora Kutarisisa Kwazvo kune Inonakidza Yorkie Poo
labs yakasanganiswa neborder collies
chihuahua yakasanganiswa nemifananidzo ye terrier
zvinorevei kana imbwa ichinanzva tsoka dzayo
chii chinotarisirwa hupenyu hwepeekapoo